ငါ၏စာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံး 10 ပဲရစ်မှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့အရာဖြစ်ပါသည် မူဆယ် Carnavalet. ဒါကပြတိုက်ပြုပြင်မှုများအဘို့အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီး, သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်တရားဝင်ဒီဇင်ဘာလအပေါ်ပြန်ဖွင့်နေသည်, 20ကြိမ်မြောက် 2019! အဆိုပါ Marais ၏သမိုင်းဝင်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်, အဆိုပါ Carnavalet ပြတိုက်ပဲရစ်၏သမိုင်းထံအပ်နှံဖြစ်ပါတယ်. ယင်း၏ဇစ်မြစ် မှစ. ယနေ့ခေတ်မှ.
အဆိုပါဧည့်သည်တမြို့လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကြက်သရေ collection များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. ဂါလိုရောမနှင့်အလယ်ခေတ်တ္ထုများနှင့်မော်ကွန်းတိုက်ထံမှ. ပန်းချီကားများစွာကိုအမြိုးမြိုးမှပြင်သစ်တော်လှန်ရေးထဲကနေအမှတ်တရများ, ပန်းပု, အချိန်ကွဲပြားခြားနားသောကာလမှသည်ပရိဘောဂများနှင့်အနုပညာတ္ထု!
သင်ကိုယ်တိုင်ကြွယ်ဝစေရန်ပဲရစ်၏မြို့နှင့်ချစ်ခြင်းကိုချစ်လျှင်နှစ်ဦးစလုံးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် Musee Carnavale ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်t ကို! ယင်း၏အဖိုးတန် collection များကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုတအံ့တသြလိမ့်မည်, ယင်း၏ဗိသုကာ, နှင့်လေထု, ပဲရစ်၏ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း!
ဒါကြောင့်ပဲငါ့ကို Is, သို့မဟုတ်အခါတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးက Notre Dame ဖျောပွထားသ, ကိုယ့် Notre Dame ၏ဗစ်တာဟူဂိုမမေ့နိုင်သောခါးကုန်းအဘိုးကြီးစဉ်းစား? သငျသညျရုပ်ရှင်ကိုချစ်ဖြစ်စေမ, ဒီဘုရားကျောင်းမှာအလည်အပတ်ခရီးမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မသာက badass အလယ်ခေတ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်သစ် Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာထွက်၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်!
အဆိုပါစွန်းဖန်ပြတင်းပေါက် (အထူးသနှင်းဆီ Window), ပျံ buttresses နှင့်ပန်းပုနဲ့တူဗိသုကာအသေးစိတ်ကို၏အသုံးပြုမှုကိုကဒီအခမဲ့ပဲရစ်အတွေ့အကြုံကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်အောင်. အဆိုပါဘုရားရှိခိုးကျောင်းကနေအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အပဲရစ်၏ငှက်တို့သည်မျက်စိအမြင်များအတွက်ခေါင်းလောင်းတာဝါတိုင်ကိုတက်. အဆိုပါဘုရားရှိခိုးကျောင်းသူ့ဟာသူတစ်ဦးအမြင်များအတွက်, Square ကိုဂျင်း XXIII လှပတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးတစ်ခုနောက်ဘက်အမြင်ယူကောင်းတစ်ဦး vantage အမှတ်ပေးပါသည်. လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး? ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည် 10 ပဲရစ်မှာလုပ်ဖို့အခမဲ့အရာ. အဘယ်ကြောင့်? သင်ကမှန်းဆ. ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
ဤ လှပသောအဆောက်အဦး မူလကတစ်ဦးအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာအရပျ. သို့သျောလညျး, ဒီနေ့ခေတ်ကဂူဗိမာန်သို့ပြောင်းလဲထားသည်. ဒါဟာအများအပြားထင်ရှားတဲ့ Parisian ၏အကြွင်းအကျန်ရရှိထားသူ; ဗစ်တာဟူဂို, မာရီ Curie, Alexandre နာမတော် Dumas ပေမယ့်အနည်းငယ်! အဆိုပါ Pantheon အထင်ကရ silhouette နှင့်အမိုးခုံးပု Montagne မှာ Saint Genevieve ရဲ့ထိပ်မှာဆောက်ထားတဲ့နေကြတယ်, လက်တင်ရပ်ကွက်၏သမိုင်းဝင်တောင်ကုန်း.
ဒါ့အပြင်အနီးကပ်အခမဲ့စာရင်းသည်ပဲရစ်လုပ်ဖို့အကြှနျုပျ၏အခမဲ့အရာ topping မှ. တူးမြောင်းစိန့်မာတင်ရဲ့အရှည် Walking! ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဒီအကြွင်းအကျန်တဦးတည်းဤမြို့၌သွားလာ. ရေလမ်းကိုဖန်ဆင်းတစ်ဦးကလူကို, တူးမြောင်းအကြောင်း 4.5 ကီလိုမီတာရှည်လျားသော, အဆိုပါ Seine မှတူးမြောင်းက de L ကို Ourcq ဆက်သွယ်ထားသော. မူလက built-in 1802 အဆိုပါ Ourcq မြစ်တစ်ခုထွက်တွန်းကန်အားအဖြစ် Napolean အားဖြင့်, Parisian မှသောက်ရေရောက်စေဖို့ရည်မှန်းဝမ်းရောဂါနှင့်ဝမျးကသြှေးသှတူသောအလားအလာရောဂါများနှင့်အတူ riddled.
တိုင်းတဆယ်ငါးနှစ်သို့မဟုတ်ဒါတူးမြောင်းအဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့ dredged ပေမယ့်မကြာသေးမီအချိန်များအတွက်တူးမြောင်းပတျဝနျးကငျြဒေသသူ့ဟာသူ undergone ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးဖြစ်ပါတယ်. တူးမြောင်းတစ်လျှောက်အရက်ဆိုင်နှင့်ဘား၏အုံပြန့်ပွားကိုရှာပါ. ဤသည်ဧရိယာကျောင်းသားလူဦးရေထဲကလည်းလူကြိုက်များ Hang ဖြစ်ပါသည်. ပေါ်ပြူလာယဉ်ကျေးမှုအတွက်, တူးမြောင်းဧရိယာရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ featured ခဲ့သည် Amelie ကျောက်များကိုကျော်သွားဖို့နေရာအဖြစ်.
နောက်ထပ်စူပါကျော်ကြားသော အလည်အပတ်ဖို့ရာအရပျ သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေါ့, အခမဲ့! တစ်ဦးကအောင်ပွဲခံ Arch, တိတု၏ရောမ Arch အားဖြင့်မှုတ်သွင်း, ဒီအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးပြင်သစ်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သူကိုပြင်သစ်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၏ဘဝများနှင့်နပိုလီယံစစ်ပွဲများအထိမ်းအမှတ်. အဆိုပါ Arc အောက်ဖက်မဟာစစ်ပွဲ၏အမည်မသိစစ်သား၏သင်္ချိုင်းတွင်တည်ရှိသည်နှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန်နေ့အတွက်ကတည်းကကိုမီးရှို့ခဲ့ထာဝရမီးလျှံအားဖြင့်မှတ်သားနေသည် 1921. ခြောက်လအလွန်အရေးကြီးသောသက်သာသည့်မျက်နှာစာတော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့်နပိုလီယံစစ်ပွဲ၏အသီးအသီးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့သော့ခအချိန်လေးကိုအလှဆင်. သူတို့ကအထွေထွေ Marceaus သင်္ချိုင်းများပါဝင်သည်, Austerlitz ၏စစျပှဲမြား, Arcole, Jemappes, နှင့် Aboukir, နှင့်လက်ဇန္ဒြီးယား၏ကျဆုံးခြင်း.
ဤသည်မူလက Chartres ၏ Duke ကဝယ်ယူခဲ့သည့်အများပြည်သူသုံးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်. သူကဘုရငျလူးဝစ်၏ဝမ်းကွဲဖြစ်ပါသည် XVI. အဆိုပါပန်းခြံလူးဝစ် Carmontelle အားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်တူဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်. ထိုဥယျာဉ်ကိုကြေးဇူးအားဖွငျ့မြားစှာဒီကဗျာဗိသုကာအင်္ဂါရပ်များရှိပါသည်. သူတို့ကအဓိကပန်းခြံဂိတ်မှာသေးငယ်တဲ့ rotunda ပါဝင်သည်, တစ်သေးသေးလေးရှေးခေတ်အီဂျစ်ပိရမစ်, ရောမ colonnade, တရုတ်ခံတပ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတစ်ဦးဒတျချြလေရဟတ်စက်နှင့်အခြားသိချင်စိတ်. ပန်းခြံသွားရောက်လည်ပတ်အားလုံးသေးသေးလေးအတွက်ကမ္ဘာ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအံ့ဘွယ်သောအမှုလာရောက်လည်ပတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏.
သငျသညျသစ်ကိုအဘယျအကွောငျးကိုတွေ့ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်နှင့်ကမ္ဘာ၏စတိုင်လ်မြို့တော်ဖြစ်ပျက်? ထိုအခါ Galerie la Fayette မှာကျင်းပအခမဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲများတက်ရောက်ရန်တဦးတည်းအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မရ, တိုင်းသောကြာနေ့မှာ3ညနေ. သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ကြိုတင်မှာကြားထားစေသေချာအောင်လုပ်ပါ, ကြိုတင်မဲအတွက်လိုအပ်သောနေ့စွဲအပေါ်ရရှိနိုင်မှုကိုသေချာစေရန်. လည်း, အခြားအစွမ်းထက်တဲ့အခမဲ့လှုပ်ရှားမှု, သင် Galerie la Fayette မှာလျှင်, ပဲရစ်၏အကောင်းဆုံးအမြင်များများထဲမှများအတွက်ခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့သွားရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သူ့ဟာသူ Arcade အတွက်စျေးဝယ်အတွက်နောက်မှစျေးဝယ်တချို့ဝင်းဒိုးကိုလုပ်ပါ, သငျသညျအပိုအချိန်ရှိသည်ဆိုပါက.
ပဲရစ်မှာလုပ်ဖို့အခမဲ့အမှုအရာ၏ဤရွေးရှည်လျားအားလုံးတစ်နှစ်မဟုတ်ပါဘူး, သင်မူကား, ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လများလအတွင်းပွင့်လင်းသောလေထုရုပ်ရှင်ရုံကိုခံစားနိုင်ပါတယ် (တနင်္ဂနွေမှကြာသပတေးနေ့) မြို့သူမြို့သားအကြီးဆုံးဥယျာဉ်တ. ပြပွဲဂန္ရုပ်ရှင်ရုံကနေပိုပြီးခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်ကွဲပြား. တစ်ကုန်းပတ်ကုလားထိုင်စာအုပ်ဆိုင်များနှင့်မကြာမီမိုက်မဲရရှိသွားတဲ့သကဲ့သို့အချို့ရုပ်ရှင်မွေ့လျော်ဘို့ပြင်ဆင်ရမည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အခမဲ့အမှုအရာအားပြုခုနှစ်တွင်ပဲရစ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/free-things-paris/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)